Ogaden News Agency (ONA) – Ciyaarta Kaniisdo gubidda yaa ka dambeeya
Ciyaarta Kaniisdo gubidda yaa ka dambeeya
Geeska Afrika waxaa ku nool dad kala aaminsan labada diinood ee kala ah Masiixiyadda iyo diinta islaamka. Inta la xasuusan yahay wax dagaal diineed ah oo ka dhex dhacay shucuubta Geeska Afrika oo aanay Itobiya masuul ka ahayn laguma hayo taariikhda. Marwalbana xukunka ka jira Itobiya wuxuu u adeegsan jiray dagaalada ay ka dhex oogaan labada diinood inay xukunka ku ilaashadaan ama hantida shucuubta kale ku boobaan sida dagaaladii Imaam Axamad Gurey uu la galay boqortooyadii Abyssinia qarnigii 15aad markay ku soo duuleen inay boobaan shacabka Somaliyeed oy ku gaba-gabeeyeen Zaylac.
Maalmahan waxaa saxaafada qaarkood ay hadal hayaan muslimiintii Itobiya oo burburinaya Kaniisado oo laynaya dadkii masiixiyiinta ahaa ee la daganaa. Arintan oo sida ay sheegeen ka bilaabatay markii dad muslimiin ah oo ka cadhaysan hadal ay yidhaahdeen wuxuu ahaa been abuur loo sheegay ay soo weerareen masiixiyiintii la daganayd. Dadkan muslimiinta ah ayaa ka gadooday sida ay yidhaahdeen markii loo sheegay in masiixiyiintii la daganayd ay jeex-jeexeen kitaab quraan ah oy ihaanee-yeen ka dibna iyagoo ku dhawaaqaya –Alaahu Akbar – ay weerar ku soo qaadeen oy burburiyeen kaniisadihii, dad masiixiyiin ahaana ku dileen halkii.
Sheekadan oy buun-buuninayaan saxaafadaha kaniisadaha u hadla hadana ay soo galeen warsidayaasha qaarkood ee xag-jireenka ah sida Fox News, habka loo dhigayo qofkii caqli leh wuu garan karaa ujeedada ka dambeysa iyo gacanta qarsoon ee fulinaysa. Odhaah caan noqotay ayaa jirta oo tidhaahda – Hadaad aragto dagaal meel uu ka dhacay waxaad baadhaa yay faa’iido ugu jirtaa -.
Maamulka KT. Meles ee Wayaanaha waxay dalka Itobiya ku xukumaan isfaham darida ay ka dhex abuuraan shucuubta halkaa dagan. Qaar la gumaysan jiray waligood iyo qaar wax gumaysan jiray ayay ka kooban yihiin shacabka Itobiya. Marka laga tago qawmiyadaha taariikh ahaan aan ka mid ahaan jirin boqortooyadii Abyssinia, waxaa waligeed ka jiray boqortooyadaa shacab la duudsiyo xuquuqdiisa oo adoon ah iyo dabaqad xukunka haysata oo dalka ku maamusha nidaamka kala sareynta.
Xataa markii ay dhalatay tawradii casaanka ahayd ee Mingisto ee la tirtiray nidaamkii kala sareynta sida ay sheegteen, nolosha shacabka waxba iskama badalin. Qawmiyadda Tigree oo boqortooyada qayb ka ahaan jirtay ayaa ka gadoodatay nidaamkii Mingisto ee Amxaarada ay hogaaminayeen iyagoo halgan dheer oo dhiig badan uu ku daatay ka dib ay la wareegtay jabhadoodii TPLF xukunka Addisababa.
Maxaa isbadal ah oo ka dhacay Itobiya? Inkastoo ay ku dhawaaqeen TPLF-tu inay qawmiyad walba iskeed isku xukumi doonto, qawmiyadii doontana ay ka bixi karto waxay ugu yeedheen Federaalka Itobiya, hadana nidaamka kala sareynta iyo aduunsiga waxba iskama badalin. Hadafka ay ka laahyeen -Federaalka- ood moodo ilaa xad inuu u hirgalay wuxuu ahaa un inay ku handadaan qawmiyadaha aaminsan –Itobiya waa mid- iyo caalamka kalee aan jeclayn inuu qabtolkan xooga la’isugu hayo kala yaaco, markastoo ay xukunkooda u cabsdaan inay qaybtooda goosanayaan ka dibna ay yeedhin doonaan firimbigii kala tagga Itobiya.
Baqdintii noocaa ahayd ayaa hadda soo yaraaneysa ka dib markii ay shucuubta iyo qawmiyadaha ku wada nool Itobiya fahmeen ciyaarta Wayaanaha uu dheelayo oy aamineen inaysan ku sii noolaan Karin cabudhinta iyo cadaadiska iyo adoonsiga Wayaanaha. Waxaa kaloo isa soo taraya caalamka reer galbeedka oo soo fahmaya hadda nidaamkan Wayaanaha TPLF ee shuuciga (Maoism) ku dhisan inuu khatar ku yahay shacuubta Geeska Afrika uuna yahay midka abuuraya qalaaqilka gobolka suu ugu ilaashado jiritaakiisa.
Waxaad moodaa hadda inay u rogeen ciyartii hore in Kaniisadaha caalamka ay tusaan in xukunkooda uu yahay midka ka badbaadinaya malaayiinta muslimiinta ahee ay gumaystaan inay ku gadoodaan xukunka masiixiga ah ee waligeedba ka jiray halkan ee dawladaha Yurub ay badbaadin jireen. Waxayna tahay in ficil –action- ahaan loo tuso. Dhcadadan ayaana daliil u ah.
Sheeka been ah (ama runba ah) ayaa suuqa la galiyay oo ah in quraan la jeexjeexay ka dibna waxaa gadooday muslimiintii oo gubay kaniisadihii oo idil waxayna barakiciyeen intaasoo kun oo masiixiyiin ah. Mana joogsanin dhibkii lagu hayay dadka masiixiyiinta ah ilaa ay Kaniisadaha caalamka ka codsadeen xukuumadda Meles Zinawi inay badbadiso dadkaa. Waxay la mid tahay un barnaamijkii Masarida ay u bixiyeen –Baldajiya- ee xukuumadii Mubaarak uu u soo diray (Maydaanu Taxriir) qaar baangado wata si dadka ay u qoor gooyaan ka dibna dadka ay u dalbadaan Boolsikii ka ilaalin jiray Baldijyada inay soo noqdaan.
Qofka la socda qoraalada ka xogwaramaya dhacdooyinkan la leeyahay kaniisado ayaa la gubay wuxuu si sahal ah u arki karaa inay ka dambayso gacanta xukuumadda oo ujeedooyin dhowr ah ka leh arintan. Inay u hirgali doonto iyo in kalese waqtiga ayaa sugi doona, waxaadse moodaa ilaa hadda inay mucaaradka ka soo horjeeda Wayaanaha fahamsan yihiin dheeshan.